जेठ १५ मै पूर्ण आकारको बजेट आउँछ - Karobar National Economic Daily
जेठ १५ मै पूर्ण आकारको बजेट आउँछ
query_builderMay 23, 2017 10:48 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1514
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री,कृष्णबहादुर महरा
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन् । यसअघि पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका महरा पटक–पटक पार्टी प्रवक्ता तथा महासचिवसमेत रहिसकेका छन् । महरासँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेको पनि अनुभव छ ।
राजनीतिक एजेन्डाकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउने महरा राजनीतिक सहमतिसहितको पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । पहिलो पटक संघीय मोडलको बजेट ल्याउने सौभाग्य पाएका मन्त्री महरा बजेटको मिति सार्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकमा असर गर्ने दाबी गर्छन् । संघीयता कार्यान्वयन ठूलो चुनौती रहेको बताउने महरा सरकारमा आएपछि आफूले गरेका कामबाट भने सन्तुष्ट छन् ।
लोडसेडिङको अन्त्य, स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयन सरकारका मुख्य उपलब्धी भएको दाबी गर्ने महरा २३ वर्षपछिको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरसँगै अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू समेत सकारात्मक बन्दै गएको र आगामी दिनमा तिब्र रूपमा आर्थिक विकास हुनेमा ढुक्क छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै पुँजीगत खर्च बढाउनु रहे पनि पछिल्ला दिनहरूमा खर्च बढिरहेको भन्दै यस वर्ष ८४ प्रतिशत बजेट खर्च हुनेमा उनी आशावादी छन् ।
१० महिना सरकारमा बसेर नयाँ योजना बिना नै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका महरा केही दिनमा सरकारबाट बाहिरिने छन् । उनै अर्थमन्त्री महरासँग पहिलो पटक आउन लागेको संघीय बजेट, सरकारको फेरबदलले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र १० महिने कार्याकालका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी:
दुईवटा निर्वाचनको मुखमा बजेट ल्याउने भन्नुभएको छ, जेठ १५ मा बजेट आउँछ कि आउँदैन ? आयो भने आंशिक वा पूर्ण बजेट कस्तो हुन्छ ?
हो, जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकार सञ्चालनकै लागि पनि बजेट चाहिन्छ नै । दुई चरणको निर्वाचन सकिएपछि जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता खुवाउनेदेखि लिएर ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ नै । बजेट भनेको सरकारको अर्थतन्त्रको ढुकुटी हो ।
जहाँसम्म दुईवटा निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्ने कुरा छ, यो विषयमा निर्वाचन आयोगले नै संविधानभन्दा माथि कोही नभएको भन्दै बजेट ल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताले नरोक्ने भनिसकेको छ । बजेट ल्याउन मिल्ने सबै बाटा खुला हुँदाहँुदै बजेट ल्याउन के समस्या छ र ?
त्यसैले बजेटको विषयमा अन्योल हुनुपर्ने अवस्था छैन । संविधानमा नियमित वा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । आंशिक भन्ने कुनै विषय समावेश छैन, यस विषयमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । जेठ १५ मै पूर्ण आकारको बजेट आउँछ ।
निर्वाचन आयोगले बजेट ल्याउन मिल्ने भने पनि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नपाउने भनेको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच केही सहमति भएको छ ?
एक वर्षमा काम गर्नुपर्ने सबै कुरा बजेटमा झल्किने हो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले नै बजेट आउने भएकाले केही राजनीतिक सहमति अवश्य चाहिन्छ ।
त्यसमा पनि एक खालको सहमति भएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउन सरकारका आफ्नै भिजन छन्, त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट चाहिन्छ नै, यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
चुनाव अगाडि नै बजेट आए पनि राजनीतिक दललाई कुनै असर नपार्नेे सहमति भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक रहेका बेला बजेट रोकियो भने त्यसले हामीले चाहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पनि त केही समस्या पर्न सक्छ नि ।
यस विषयमा सबै दल संवेदनशील छन् । पुरानै ढाँचामा टेकेर निर्वाचनलाई असर नपार्ने गरी बजेट ल्याउन मिल्ने गरी दलहरूबीच एक खालको सहमति भएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट आउँछ, स्थानीय तहमा जाने बजेट एकमुस्ट रहनेछ ।
मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट आउँछ भनेर असन्तुष्ट राजनीतिक दलले निर्वाचन या बजेटमध्ये एकको मिति सार्न भन्दै आएका छन् नि, यसमा यहाँको धारणा के छ ?
केही कुरा आएका थिए । पुरानै सिलिङभित्र संघीय मोडलको बजेट ल्याउने र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने गरी बजेट ल्याउन मिल्छ भनेर एक खालको सहमति भएको छ । बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले बजेटको मिति सार्न मिलेन । अर्को कुरा, निर्वाचनको मिति सार्ने विषयमा दलहरू मात्रै सहमत भएर भएन ।
निर्वाचन आयोगले मिति सारेर तयारी गर्न नसक्ने भनेको छ । हामीले राजनीतिक निकास पनि खोजेका छौं । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन पनि जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा पछि पार्नु हुँदैन । विकासलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । अर्को कुरा, संविधानमा नियमित वा पूरक बजेट मात्रै ल्याउन पाइने व्यवस्था छ ।
उसो भए भनिदिनुस् कि बजेटको सांगठनिक ढाँचा कस्तो हुन्छ ?
हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छांै । यसैलाई आधार मानेर पहिलो पटक संघीय मोडलको बजेट आउँछ । परम्परागत खालको बजेट आउँदैन । किनभने स्थानीय निर्वाचनपछि त गाउँ–नगर सरकार बन्ने हो । स्थानीय प्रदेशिक संघीय सरकार आउने भएकाले त्यही आधारमा बजेट आउँछ । निर्वाचनका कारणले कुनै योजना प्रस्तुत नगर्ने भन्ने कुरा छ ।
स्थानीय अनुदान बढेर जान्छ । माघ ७ गते अघि प्रादेशिक सरकार बन्छ । संघीयताउन्मुख बजेट आउँछ । संघीय ढाँचामा बजेट निर्माण भइरहेको र त्यसमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी पुरानै शैलीमा बजेट आउँछ । चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन विवाद उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय तहमा जाने बजेट ब्लकमै राख्ने सहमति भएको छ ।
पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदै छ, तर योजना कार्यक्रमबिनाको बजेट कसरी सम्भव छ त ? नयाँपन भनेको के नि ?
यसमा कुनै दुविधा छैन । किनभने स्थानीय सरकार बनेपछि ती सरकारले आफ्नो तह वा प्रदेशका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू आफैं बनाउँछन् र आफंै योजना प्रस्तुत गर्छन् । उनीहरूलाई अझै सहज हुन्छ ।
सबै स्थानीय तहको निर्वाचन नभइसकेकाले त्यसका लागि सरकारले अहिले ब्लकमा पैसा राख्ने भनेको छ । सबै स्थानीय तहमा जाने बजेट अहिले ब्लकमै रहन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँड गर्ने अधिकार छ । संविधानले नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउने अधिकार स्थानीय तहमै दिएको छ । यही नै नयाँपन हो । कुनै पनि चीज नयाँ आउने भन्दा अन्योल हुन्छ । सबैले जानेमानेको त नयाँ नै हँुदैन ।
यहाँले स्थानीय तहमा जाने सबै पैसा ब्लकमा राख्ने भन्नुभयो, यो कसरी परिचालन हुन्छ, स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अर्थ स्वयंले ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूमार्फत नै पठाउने भनेको छ, तर समस्या कहाँनेर छ भने स्थानीय विकास केन्द्रमा रहन्छ वा रहँदैन । हामीले सीधै स्थानीय तहमै पठाउने गरी काम अघि बढाएका छौं । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, केही दिनमै टुङ्गो लाग्छ ।
बजेट सीधै स्थानीय तहमा पठाउने भनिरहँदा अहिलेसम्म सबै तहमा बैंकिङ पहुँच छैन । कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ बजेट ?
हो, यो गम्भीर विषय हो । ठोस निर्णय नआइसके पनि सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच छैन भन्ने महसुस गरेको छ । यो जरुरी छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर बैंकिङ पहुँच पु¥याउनु धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने सरकारले पनि बुझेको छ ।
तत्कालका लागि जसरी जाने गरेको थियो त्यही आधारमा जान्छ । जस्तो कि हामीले हालै मात्रै ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि भनेर प्रत्येक तहमा १ करोडका दरले सिड मनी सीधै गाउँमा जाने गरी पठायौं । अब पठाउने पनि त्यही नै हो ।
बैंकिङ च्यानललाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने राज्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन, केही समयपहिलेकै आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो चाहना हरेक तहलाई समृद्ध बनाउने हो, किनभने हरेक गाउँ समृद्ध भए भने मुलुक समृद्ध हुन्छ र विकासका कार्यक्रमले गति लिन्छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एक खालको टुंगो लागिसक्यो, प्रदेशको कार्यक्रमलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ, के छ तयारी ?
प्रदेशसभा गठन हुनुअघि नै बजेट आउने भएकाले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरू केन्द्रमै रहन्छन् । प्रादेशिक संरचना तयार भएको छैन । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको प्रस्ताव गरिए पनि प्रदेशको संरचना निर्माण नभएकाले प्रदेशका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश हुँदैनन् ।
तर, निर्वाचनपछि निर्वाचित स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले आफ्ना योजना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नेछन्, त्यसका लागि चाहिने बजेट ब्लकबाटै जान्छ । तर, पहिलो पटक आउन लागेको बजेटले प्रदेशका विकास कार्यक्रम, प्रदेशको कार्य क्षेत्र र आयोजनाको बजेट केन्द्रमै रहन्छ, त्यो विषयमा सबै दलहरू सकारात्मक छन् ।
संविधानअनुसार आउँदो माघ ७ भित्रमा प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने भनिएको छ, चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
आगामी माघमा हुने भनिएको प्रदेशको चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभाको सञ्चालनका लागि भने बजेट व्यवस्थापन हुन्छ नै । संविधानअनुसार वित्तीय आयोगले प्रदेशिक बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट निर्धारण हुन्छ । प्रदेशको संरचना विकासका लागि केही बजेट छुट्याउनेछ । संविधानमा ७ प्रदेश र त्यसको सीमांकन गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको गठन हुनका लागि प्रदेशको चुनाव हुनैपर्ने हुन्छ ।
यतिबेला निर्वाचनसँगै सरकार फेरबदलको कुरा पनि छ । यसले बजेट ल्याउन कुनै असर गर्दैन ?
यो गठबन्धनको सरकार हो । बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयसँग सरकार छोड्ने या सरकारमै बसेर ल्याउने भन्ने विषयले खासै महŒव राख्दैन । मान्छे कोभन्दा पनि बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो, कार्यक्रम कस्ता आउँछन् भन्ने कुरा हो । वर्षभरि काम गरेर बनाएका योजना कार्यक्रमहरू सरकार छोड्नेबित्तिकै कोल्याप्स हुन्छन् भन्ने अवस्था छैन ।
यसपछि हुने पनि यही गठबन्धनको सरकार हो । सहमतिअनुसार नै सरकार चल्ने भएकाले सबै कुरा सहमतिबाटै हुन्छ । जहाँसम्म कामचलाउ सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउने भन्ने कुरा छ, त्यो होइन । सरकार फेरबदल भएर कामचलाउ भए पनि बजेट कामचलाउ होइन, पूर्ण बजेट नै आउँछ । त्यसमा सत्तारूढ घटकबीच सहमति भइसकेको छ । सबै कुरा सहमतिबाटै हुन्छ ।
तपाईंको सरकार अब केही दिनमै बाहिरिने करिब निश्चित भएको छ, तपाईंले आफ्नो अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
मैले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि काम धेरै भएका छन् । खासगरी विधेयक निर्माणका काम अघि बढेका छन् । नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन् ।
तीन–चारवटा कानुन बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी ऐन संसद्मा छ । बाफिया ऐन आयो । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो । अन्तरसरकारी वित्तीय ऐन, श्रम ऐनलगायतका ऐनहरू पनि तर्जुमा भइरहेका छन् ।
म अर्थमन्त्री भएर आएपछि नै समृद्ध आर्थिक क्रियाकलापमा ठोस सुधार गर्न सकिन्छ भनेर ६० बुँदे कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक सुधारका विषयहरू समेटिएको छ । जस्तो कि, राजस्वलाई पारदर्शी बनाउने भनेर सबै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्ने भनेका छौं । यस्तै करका दरहरू यथावत् राखेर दायरा बढाउने भनेका छौं ।
अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको विषयमा कर मिनाह गर्ने, पुनर्निर्माणको काममा विशेष जोड दिएर काम गरेका छौं । समग्रमा यतिबेला आर्थिक परिसूचकहरू निकै सकारात्मक देखिएका छन् । म सन्तुष्ट छु ।
आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका पछाडि अरू कारण पनि त होलान नि ?
हो, हामीले सरसर्ती बुझ्दा परिसूचक घटे वा बढे भन्ने हुन्छ । तर, एउटा मन्त्रालयले मात्रै राम्रो काम गरेर हुँदैन । सबै मन्त्रालय तथा सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका छ । साँचो कुरा के हो भने २३ वर्षपछि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ७ पुगेको छ । यसका पछाडि मुख्य त आर्थिक अनुशासन नै हो । अर्को कुरा समयमा पानी परेका कारण कृषि उत्पादन बढ्यो ।
वर्षांैदेखि अँध्यारोमा दैनिकी चलाउँदै आएका आमजनताले उज्यालोको मुख देख्न पाए लोडसेडिङ हटेपछि बन्द भएर बसेका २ सयभन्दा बढी उद्योग सुचारु भए । सबै कारणले आर्थिक परिसूचक राम्रो भएको हो । त्यसैले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा समृद्धिको बाटोमा लाग्ने मापदण्डहरू तयार भएका छन् ।
यसअघिका मन्त्रीले गर्न नसकेको काम तपार्इंले के गर्नुभयो ?
हामीकहाँ स्पष्ट खाकासहितको आर्थिक नीति नै छैन । नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर आर्थिक नीतिबारे स्पष्ट परिभाषा अहिलेसम्म भएका ऐन–कानुनले गर्न सकेका छैनन् ।
त्यही आवश्यकता महसुस गरेरै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरिरहेको छ । नीतिले मुलुकको स्पष्ट खाका र भिजनसहितको उचित विश्लेषणसहित ठोस नीति तय गर्ने भनिएको छ । यसका लागि विज्ञहरूको एउटा समूह बनेको छ । टोलीले सातवटै प्रदेशमा घुमेर सुझाव संकलन गरिसकेको छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्र बाँकी छ ।
आर्थिक नीति छँदै थिएन । त्यसको सुरुवात भएको छ । अर्को कुरा, यसअघिका मन्त्रीहरूले कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मात्र जोड दिने, कतिपयले राष्ट्रिय सम्बन्ध मापदण्डलाई मात्र जोड दिने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय मापदण्ड जोडिन्छ, त्यो सकारात्मक छ । यी दुवै सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएँ भन्ने लागेको छ ।
यसबीचमा दाताहरूको सहयोग कस्तो पाउनुभयो त ?
दाताहरूको सहयोग उत्साहजनक छ । म अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न मुलुकका दाताहरूको बैठकमा सहभागी भएको छु । यो सरकारप्रति दाताहरूको आकर्षण बढेको छ । धेरै सम्झौता भएका छन् ।
दाताहरूले नेपाललाई दिने अनुदान भनांै या ऋण भनौं, सबै बढेको छ । यस वर्ष पनि बजेटमा दाताहरूले २० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दाताहरूको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि सरकार छोड्ने बेलामा अनियमित तरिकाले रकमान्तर गरेको भन्ने आरोप छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो मिथ्या आरोप हो । रकमान्तर अहिले भएको होइन । सरकार छोड्नेभन्दा पहिले नै रकमान्तर भएको छ, अहिले पनि भएको छ । हामीले काम गर्ने आयोजनालाई नगर्ने आयोजनाको बजेट झिकेर दिने भनिएको थियो र अहिले पनि त्यही नै भएको हो ।
यो परम्परागत प्रक्रिया हो । अर्को कुरा, कहाँ, के–कसरी रकमान्तर भयो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । हामीले लुकाएर, छिपाएर, जनतालाई झुक्याएर गरेका छैनौं । हरेक दिनको रिपोर्ट वेबसाइटमा अपडेट गर्ने गरेका छौं । त्यसैले जे–जस्तो आरोप लगाइएको छ, यो गलत छ । काम गरिरहेका तर पैसा नभएर अड्किएर बसेका कार्यक्रमका लागि बजेट दिँदा यस्तो अरोप लगाउन मिल्दैन ।
जहाँ अलिकति काम बढी हुन्छ त्यहाँ पैसा पठाएका छौं । अर्को कुरा, पूरा बजेट दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका तर आधा बजेट दिएर पठाएका कार्यक्रमलाई बजेट दिएका हौं । खर्च नभएर राज्यको ढुकुटीमा यत्तिकै थन्किएर बस्नुभन्दा त बजेट खर्च भएर विकासका कामले गति लिँदा राम्रो हुन्छ नि, होइन र ?
अर्थतन्त्र कृष्णबहादुर महरा माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन